Maxay Tahay Sababta Ay Xukuumadda Soomaaliya Uga Hadli Weyday Wasiirrada Ay Xilalka Ka Qaado | Hangool News
Maxay Tahay Sababta Ay Xukuumadda Soomaaliya Uga Hadli Weyday Wasiirrada Ay Xilalka Ka Qaado
Hangoolnews:- Wasiirkii waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan wuxuu u dambeeyey tiro wasiirro ah oo soo maray xukuumadda raysal wasaare Xasan Cali Khayre, ku waasoo xilliyo kala duwan xilalka laga qaaday, ama iska casilay.
Sida ay sheegeen wasiirrada qaar oo xilka laga qaaday, waxaa jiray balanqaad loo sameeyay oo ahaa in ay waqtiga isla dhamaysan doonaan xukuumadda.
Hase yeeshee tiro 7 wasiir ah ayaa laga qaaday xilalkii ama laga eryey wasaaraddihii ay hayeen ayadoo aan la sheegin sababta.
Tiradaas waxaan ku jirin wasiirradii iyo wasiir ku-xigeennadii baneeyey boosaskooda, si ay ugu tartamaan jagadii guddoomiyaha baarlamaanka, wasiir Cabaas Siraaji oo Muqdisho lagu dilay iyo wasiirad Maryan Qaasim oo is casishay.
Dadweynuhu xaq ma u leeyihiin in ay ogaadaan sababta loo eryayo wasiirrada?
Mala oran karaa waa falsafad siyaasadeed oo u degan dowladda hadda jirta?. Taasi waa su’aal aanan durba laga jawaabi karin, maluhuna waqtiga ka jawaabi doono.